DEG DEG: Ciidamadii Al-Shabaab ee ku sugnaa Ceelbuur oo isaga baxay
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Ciidamada Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaabka Ciidamadaas u faarujiyaan halkaas, xilli xalay guud ahaan ay baneeyeen Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamo iyo gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ayaa barqanimadii maanta ka huleelay degmada Ceelbuur, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in Ciidamadaas ay magaalada dhanka Koofur kaga baxeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ciidamada ka baxay halkaas ay ka soo jeedaan Gobolada Bay iyo Bakool, isla markaana sababaha uga baxeen ay tahay qaab deegaan ahaan, maadaama deegaanka ka soo jeedin.
Ciidamada ayaa Gawaari tiil Saldhiga degmada Ceelbuur horay u sii qaatay, inkastoo dadka deegaanka ay sheegayan in wali Ciidamo aan badneyn ku sugan yihiin degmada.
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa sheegay in is bedelka Muqdisho ku yimid aanu saameyn doonin Gobolada dalka ee ay ka taliyaan, isagoo ugu baaqay Maamulada deegaanada inay howlahooda sii wataan.
Kulan Hogaanka Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ku dhex marayay degmada Balcad ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah, kaas oo xataa kala aragti duwanaan uu ka dhashay, inkastoo markii dambe isku raaceen in ay ka baxaan Magaalada Muqdisho, deegaanada Gobolada dalkana sidooda ugu sii wadaan maamulka.
Dadka odorasa siyaasada ayaa sheegaya in Al-Shabaab qorsheyneyso inay dib u soo celiso hababkii lagu yaqiinay ee xilligii Itoobiyaanka ay joogeen ee dilalka qorsheysan loo geysanayay saraakiisha, qaraxyada Miino iyo bambaanooyinka lala eegto xarumaha iyo saldhigyada.